Huawei: Ahoana ny fampiasana fanatsarana bateria amin'ny Android Pie | Androidsis
Ahoana ny fampiasana ny fanatsarana bateria Huawei amin'ny Android Pie
Telefaona Huawei izay nanavao na nahazo Android Pie tamin'ny fomba natoraly, Hita miaraka amin'ny safidy fitantanana bateria isan-karazany. Misaotra azy ireo fa azo atao ny mahazo fanjifana tsaratsara kokoa amin'ny telefaona amin'ny fotoana rehetra. Zavatra mety hanampy tsara amin'ny tranga izay ambany ny batery amin'ny telefaona. Fomba iray hafa hanamboarana ny fampiasana EMUI, palitao marika sinoa.
Ny fampiasana an'ity fanatsarana bateria ity amin'ny Huawei ao amin'ny EMUI sy Android Pie dia tsotra be, fa tena ilaina. Hatramin'ny lafiny iray, manana maody maromaro isika fitsitsiana angovo, miampy ilay iray ananantsika amin'ny Android. Ka ho an'ny mpampiasa maro miaraka amin'ny telefaona Huawei dia mety ho safidy tsara ny mandinika.
1 Fanatsarana bateria amin'ny Huawei
2 Fomba fitehirizana herinaratra
Fanatsarana bateria amin'ny Huawei
Ity safidy fanatsarana bateria ity dia zavatra nampidirina tamin'ny Android Pie, miaraka amin'ny fanatsarana sasany. Ao amin'ny sehatry ny telefaona Huawei dia ananantsika izany mety hitranga, ao anatin'ny faritra bateria. Ny zava-bita rehefa mampiasa an'io asa io isika dia ny mikaroka ireo dingana sasany izay mandeha amin'ny telefaona ankehitriny, izay mety tsy dia ampiasaintsika loatra amin'izany fotoana izany, fa izay mandany herinaratra amin'ny fitaovana.
Amin'izany fomba izany, dingana toy ny fampifanarahana mandeha ho azy, ohatra, izy ireo dia azo foanana, manampy antsika hitsitsy angovo amin'ny telefaona. Mila tsindrio fotsiny io safidy io isika ary avelao izy hanomboka hikaroka hoe inona ny dingana azontsika akatona amin'io fotoana io. Rehefa afaka segondra vitsy dia hasehony antsika ireto safidy ireto eo amin'ny efijery ary misafidy izay dingana tiantsika hikatona.
Momba izany fomba tsara hitehirizana bateria amin'ny telefaona, nefa tsy mila mampiasa ireo maody fitsitsiana angovo azo alaina. Fiasa iray izay tonga lafatra ao amin'ny Android Pie rehefa mandeha ny fotoana ary afaka mankafy azy amin'ny finday Huawei amin'ny fomba tsotra isika.
Fomba fitehirizana herinaratra
Ny telefaona Huawei misy Android Pie dia misy fanjifana herinaratra isan-karazany na fomba fitehirizana herinaratra. Ao amin'ny Android Oreo dia efa misy maody roa misy, izay efa nitombo ho telo ny totaliny. Izy io dia andiana safidy izay hanampy antsika hampihena ny fihinanana arakaraka ny toe-javatra. Izahay dia milaza aminao bebe kokoa momba ireo fomba telo ireo sy ny zavatra ataon'izy ireo:
Maody fampisehoana farany ambony: Ity dia maody izay tsy manome tahiry, fa handany bateria haingana kokoa. Misaotra an'ity maody ity, manao ny finday avo lenta Huawei hiasa amin'ny fahombiazana farany azo atao izahay. Ny heriny dia ampitomboina hatramin'ny farany avo indrindra, izay mety hahatonga ny telefaona hanafana na dia be loatra aza. Izy io dia fomba iray azontsika ampiasaina raha milalao Fortnite ohatra isika.
Fomba mpamonjy angovo: Ny maody fitehirizana angovo mahazatra, izay hita ao amin'ny Android Pie ihany koa. Rehefa mampiasa io fomba io isika dia hanidy ny fizotrany sasany ny telefaona. Izy io dia tompon'andraikitra amin'ny famerana ny asan'ny telefaona ao ambadika, ny fampandehanana ny fampifanarahana mandeha ho azy, ny fihenan'ny vokatra azo ary ny fanesorana ireo feon'ny rafitra. Azo ampiasaina izy raha ambany, fa ny isan-jato ampy kosa dia mijanona mandritra ny fotoana iray.
Maody mitahiry herinaratra: Fomba fitehirizana herinaratra mahery vaika kokoa, izay ampidinin'ny telefaona faran'izay betsaka ny asany, mamela fampiharana vitsivitsy fotsiny no miasa. Azo ampiasaina hiantsoana sy handefasana SMS, ary amin'ny zavatra hafa kely. Safidy io hitodihana any rehefa kely sisa ny bateria eto amintsika ary tianay ny hampihena ny fanjifana faran'izay betsaka. Mihevitra izy fa ny tahan'ny bateria dia avo telo heny raha oharina amin'ny maody finday mahazatra.
Noho izany, afaka miankina amin'ny toe-javatra izay ahitantsika ny tenantsika ampiasao ny iray amin'ireto maodely fitehirizana herinaratra ireto amin'ny finday Huawei miaraka amin'ny Android Pie. Raha hitantsika fa ambany ny bateria dia afaka mitodika any amin'izy ireo foana isika hanery kely kokoa. Indrindra raha handany ora maro mandra-pandoantsika azy indray.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android cheat » Ahoana ny fampiasana ny fanatsarana bateria Huawei amin'ny Android Pie
Afaka nandefa ny cryptocurrency ny Facebook tamin'ity volana ity
Ny Asus ZenFone 6 dia mahazo fanavaozana vaovao miaraka amin'ny fanavaozana fakan-tsary lehibe